3 xiiso leh oo ku saabsan Nalalka Waqooyiga | Saadaasha Shabakadda
Waxyaabo yar ayaa ka qurux badan oo la yaab leh marka loo fiirsado Nalalka Waqooyiga ee samada waana dadkaas nasiibka u yeeshay inay ka fikiraan mid Waxay ka hadlayaan khibrad gaar ah oo lama ilaawaan ah oo aan la barbar dhigi karin wax ilaa hadda la arkay.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato Nalalka Woqooyi, fiiro gaar ah u yeelo maxaa yeelay markaa waxaan kuu sheegi doonaa xoogaa xiiso leh oo ku saabsan ifafaalaha dabiiciga ah inay tahay inaad aragto ugu yaraan hal mar noloshaada.
1 Waxaa jira nalalka woqooyi ee meerayaasha kale
2 Waxay sifiican ugu muuqdaan kamaradaha sawirada
3 Waxaa laga arki karaa hawada sare
Waxaa jira nalalka woqooyi ee meerayaasha kale
Nalalka Waqooyiga ayaan gaar u aheyn meeraha Dunida maaddaama baadhitaanno kaladuwan oo bannaan lagu muujiyey auroras ku saabsan meerayaasha Jupiter iyo Saturn. Auroras-ka meerayaashani aad ayey uga qurux badan yihiin uguna ballaadhan yihiin dhulka maxaa yeelay meelaha magnet-ka ku yaal meerayaashaasi aad bay uga xoog iyo awood badan yihiin dhulka.
Waxay sifiican ugu muuqdaan kamaradaha sawirada
Isha bani'aadamku ma awoodo inay ogaato quruxda nalalka woqooyi, si kastaba ha noqotee, kamaradaha ayaa u oggolaanaya qaadashada sawirro si ay u ilaaliyaan dabeecadda cajiibka ah ee auroras-yadan. Kaamirooyinka 'soo bandhigiddooda dheer ee dheer oo ay weheliso cir cad oo mugdi ah waxay ka caawineysaa in lagu arko nalalka woqooyi dhammaantood quruxdooda.
Waxaa laga arki karaa hawada sare
Waxaa la cadeeyay in Nalalka Waqooyiga si buuxda looga arki karo banaanka sare. Cirbixiyeennada iyo dayax gacmeedyada ayaa sawirro ka qaadi kara wareegga Dunida oo muujinaya baaxadda nalalka woqooyi. Hadday ka dhacaan aagga mugdiga ah ee Dunida, sawirradu badanaa waa kuwo cajiib ah oo cajiib ah.
Kuwani waa 3 xiiso leh oo ay tahay inaad tixgeliso nalalka Waqooyiga, muuqaal muuqaal ah oo run ah oo ay ku raaxeysan karaan qaar ka mid ah dadka nasiibka u leh meeraha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » 3 xiiso leh oo ku saabsan Nalalka Waqooyiga